Mogadishu Journal » 2021 » May » 12
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysay tiro Maxaabiis, kuwaasoo uu cafis u fidiyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa xabsiga Dhaxe ee Xamar iyo Xabsiyo kale ka sii...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliso Marwada Koowaad ee dalka Marwo Seynab Cabdi Macallim oo ka qeyb galay xafladda caleemo-saarka Madaxweynaha dalka Uganda Mudane Yoweri Museveni ayaa soo bandhigay doorka dowladda...
Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku eedeeyay Wasiirada Maaliyadda iyo Qorsheynta xukuumada Somalia inay caqabad ku noqdeen sii deynta lacago loogu tala galay wax ka qabashada fatahaadaha ka taagan degaano hoos taga Maamulkaas. “Waxaa wax laga xumaado ah laga xumaado ah in...
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa maanta markii lixaad loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalkaas. Museveni ayaa ku guuleystay doorasho uu muran badan ka dhashay oo ka dhacday Uganda bishii January ee sanadkan. Waxaana sii weyn loo adkeeyay amniga Magaalada caasimadda ah ee...
Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii ciidamada Yahuuda Israa’il ku qaadeen masjidka Barakeesan ee Al Aqsaa iyo dilka ay u geesteen shacabka aan waxbo galabsan ee Reer Falastiin. Mohamed Salah ayaa ka dalbaday madaxda dunida...
Waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalooyin iyo deegaano ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada kooxda Al Shabaab, xili inta badan dalka iyo wadamo badan oo caalamka kuyaala ay maanta sooman yihiin. Xarakada Al Shabaab ayaa shaacisay xalay in bisha la arkay ayna maanta tahay...
Maxkamadda Ciidamadda Qalabka sida ee Goboldda Cayn iyo Mudug ee Maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday shan nin oo lagu helay in ay katirsan yihiin kooxda Al Shabaab dilal kala duwana ka fuliyeen Waqooyiga Gaalkacyo. Shantan nin ee maanta xukunka dilka ah ku riday...
Waxaa sii kordhaya wadamada iyo Ururuda cambaareenaya weerarka gardarada ah ee maamulka Israa’il ku hayo shacabka reer Falastiin, waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhalanaya weerarada israa’il ka wado Gaza . Guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika ayaa si kulu u cambaareeyay...
Manchester City ayaa loo caleemo saaray horyaalnimada Premier League ka dib markii Manchester United ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay Leicester City Talaadadii. Luke Thomas ayaa hogaanka u dhiibay Leicester daqiiqadii 10aad markii uu ka horyimid koox wax badan ka bedeshay United,...
Rocket-warning sirens sound in Tel Aviv as Hamas says it has launched 130 rockets on Israel in response to the strikes on tower building in Gaza. 12 May 2021| The Israeli military has continued its bombardment of the besieged Gaza Strip early on Wednesday, targeting several areas...
Kooxda Falastiiniyiinta ah ee Xamaas ayaa caawa 130 gantaal ku weerartay Magaalada Tel-Aviv caasimada Yuhuuda. Talaabadan ayey Xamaas sheegtay iney jawaab u aheyd duqeyn maanta ciidamada Yuhuudu ka fuliyeen magaalada Gaza taasoo lagu burburiyey dhismayaal ku yaalla magaaladaas oo...
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Balal Maxamed Cusman, ayaa maanta oo Talaado ah ka qeyb galay shirkii Golaha Jaamacadda Carabta ee heer wasiir ee aan caadiga ahayn. Fadhigan oo looga hadlaayay gardarada Israel ee ku wajahan magaalada Qudus oo ay ku jiro...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan-doceed la qaatay Dhiggiisa dalka Uganda Mudane Yoweri Museveni. Labada Madaxweyne ayaa ka wadahadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyada...
War ka soo baxay Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in bisha Shawaal laga arkay deegaano ka tirsan goobaha ay kooxdaas gacanta ku heyso. Qoraal ay kooxdu soo saartay ayey ku sheegtay in dad gaaraya illaa 8 qof kuna dhaqan gobolada Hiiraan, Gedo, Bay iyo Bakool ay arkeen...